မျော်လင့်ခြင်းနဲ့ မနက်ဖြန့်များ D
Myit Dik Shara
Ga Shagawp 3:5~6
Naamyit masin mahkra hke Yehowa hpe kam pha nga u: Naachye chyang ai nyan hta hkum shamyet shanat nga u. Lam shagu hta shi hpe adum nga u, shing rai yang, shi naalam shading na ra ai.
Selectalabel Baby Photo (3) cartoon (1) Clulture (8) Excel (3) General (24) Humours (13)့ Humours (2) Kachin Photo and Other (5) News (1) Other Poem (9) Poem (46) Political (37)
အတိတ်နမိတ်နှင့် ယုံကြည်ယူဆချက်များ နိဂုံးပိုင်း
အတိတ်နမိတ်နှင့် ယုံကြည်ယူဆချက်များ (၃)
အတိတ်နမိတ်နှင့် ယုံကြည်ယူဆချက်များ (2)
အတိတ်နမိတ်နှင့် ယုံကြည်ယူဆချက်များ (၁)
ကျောင်းဆရာတစ်ယောက် လုပ်ခဲ့တာကြောင့် လူငယ်တွေနဲ့ အထိ အတွေများပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသား တွေနဲ့ပခုံးချင်းယှဉ်ပြီး ကြိုးစားအား ထုတ်နေတဲ့သူတွေ၊ နိုင်ငံခြားသား မျက်နှာဖြူတွေကိုတောင် ငှားရမ်းခိုင်း စေပြီး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူငယ်တွေရှိ နေသလို ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဆိုပြီး ဟိုယောင်ယောင်၊ ဒီယောင်ယောင်နဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေကြတဲ့ လူငယ်တွေအများ အပြားရှိတာကို လည်းတွေ့နေရပါသည်။
အဲ့ဒီယောင်ယာင်တွေထဲက ကျောင်းသားတပည့်တွေကို မေးမြန်း ကြည့်တော့ သူတို့အားလုံး အလုပ် မရှိတာဟာ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်မရှိတာ ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ ပြောလိုက် ရင်တော့ သူတို့ အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ သင့်တော်တဲ့ အလုပ်မရှိ တာပါလို့ ဆိုတဲ့လူနဲ့ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးတော့ အကြောင်းအပေါင်း သင့်ရာ တွေပဲ ရနေကြတယ်လို့ဆိုတဲ့ လူနဲ့ ချည်းပါပဲ။ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ကို မရှိတာ ကိုတော့ ဘယ်သူမှဝန်မခံ ကြပါဘူး။
လူတချို့ကတော့ ဒီကကိစ္စကို အလုပ်လုပ်မယ့် သူဦးရေက တစ်နေ့ တခြားတိုးပွားများပြားနေပြီး အလုပ်အကိုင်နေရာက အချိုး ညီစွာတိုးတက် မလာတာကို ထောက်ပြကြပါသည်။ ဒါလည်းမမှန်ပါဘူး။ အလုပ်လုပ်ချင် သူဦးရေများပြားလာခြင်းဟာ တစ်ဖက်ကှည့်စဉ်းစားရင် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းတွေများပြားလာခြင်းပဲဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အခြေခံ သဘေတရား (supply and demand) ရောင်းလိုအားနဲ့ ၀ယ်လိုအားဆိုတဲ့အချက်ကို မေ့လျော့နေကြတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ-လူတစ်သိန်းတိုးလာတယ် ဆိုပါစို့။ ဒီလူတစ်သိန်းဟာ အစာစားပါတယ်၊ အ၀တ်ဝတ်ပါတယ်၊ လက်ဖက်ရည်သောက်ပါတယ်၊ စာဖတ်ပါတယ်၊ ဘတ်စ်ကားစီးပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးအတွက် ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေပေါ် ပေါလာရပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ အလုပ်သမားတွေလို အပ်မှု ရှိလာရပါတယ်။ လူဦးရေးတိုးလာခြင်းဟာ demand တွေတိုးလာတာဖြစ်သလို supply တွေ လည်းတိုးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်၊၊ ဘယ်နယ်ပယ်တွေအများကြီးရှိပါထယ်၊၊ ဘယ်နယ်ပယ်ကိုကြည့် ကြည့်ထပ်ချဲ့ ဖို့ မလိုတော့ ဘူးဆိုတဲ့ saturated point ရောက်နေပြီးဆိုတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး၊၊ ထပ်ချဲ့ စရာ၊ ထပ်လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတာတွေ့ နိုင်ပါတယ်၊၊ ဒီအထဲမှာ ကိုယ်ပါဝင်လုပ်ကိုင်စရာ နေရာတစ်ခုတော့ ရှိနေမှာ အမှန်ဖြစ်ပါတယ်၊၊
တချို့က အလုပ် “ဇံ“ရွေးလွန်းလို့ အလုပ်မရနိုင်တာပါ။ ဘယ်အလုပ်တွေ့တွေ့ ကိုယ်နဲ့မထိုက် တန်ဘူးလို့ ချည်းတင်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးဟာ အလုပ်လုပ်ဖို့ကျတော့ မာနကြီးတတ်ပေမဲ့ အလုပ်မရှိလို့ဆိုပြီး ဟိုအမျိုး၊ ဒီအမျိုးဆီလိုက်ပြီး လက်ဖြန့်တောင်းဖို့ကျတော့ သူတို့မာနတွေ ဘယ်ရောက်သွားကြပြီလဲ မသိတော့ပါဘူး။
ကမ္ဘာကျော်အောင် ထင်ရှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာ သူတို့ လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကို စလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ သောမတ်အယ်ဒီဆင်ဟာ မီးရထားပေါ်မှာ တစ်တွဲပြီး တစ်တွဲကူးပြီး စီးကရက်၊ မီးခြစ်ရောင်းရင်း သူဝါသနာပါတဲ့ သိပ္ပံစမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ရတာပါ။ သမ္မတလင်ကွန်းဟာလည်း သစ်ခုတ်သမား၊ လှေထိုးသား ဖောင်သမားလုပ်ခဲ့ရတာပါ။ ဘွဲ့တွေ ဘယ်နှခု ရထားရထား၊ အလုပ်မလုပ်ရင်တော့ အလုပ်လက်မဲ့လိုသာ အခေါ်ခံရမှာပါ။ ဆိုက်ကားနင်းနေသူတောင် ဆိုက်ကားဆရာ၊ ဆံပင်ညှပ်သူက ဆံပင်ညှပ်ဆရား အခေါ်ခံရ ပါသေးတယ်။ သူ့ဝင်ငွေနဲ့၊ သူ့အလုပ်နဲ့၊ သူ့ဂုဏ်နဲ့သူ ရှိပါသည်။ အလုပ်မရှိသူ အလုပ်လက်မဲ့ကတော့ ဘာဂုဏ်၊ ဘာသိက္ခာမှမရှိပါဘူး။
အဲဒါကြောင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ တပည့်တွေကို အလုပ် “ဇံ“မရွေးဖို့ အမြဲပြောပါတယ်။ ဘာမှမလုပ်ဘဲ ထိုင်နေမယ့်အစား ရရာအလုပ်ဝင် လုပ်နေခြင်းအားဖြင့် အဖိုးတန်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်မှ လူပေါင်းစုံနဲ့ တွေ့ကြုံဆက်ဆံရပြီး လူတွေအကြောင်းသိပါတယ်။ လူတွေ အကြောင်းများများသိမှ ရင့်ကျက်လာ ပါတယ်။ အလုပ်မလုပ်တဲ့သူဟာ ဘယ်တော့မှ ရင့်ကျက်မလာပါဘူး၊ ၀ါးလုံးခေါင်းထဲမှာ လသာသလို ကိုယ့်ဟာကိုယ် အခြောက်တိုက်ဘ၀င် မြင့် နေတတ်သူသာဖြစ်ပါလ်ိမ့်မည်။
မြန်မာနိုင်ငံက သယံဇာတတွေ ပေါများလွန်းတာရယ်၊ မိသားစုဖွဲ့စည်း ပုံစနစ်က ရိုးရာကျေးလက်မိသားစုဖွဲ့ စည်းပုံလို အိမ်ဝိုင်းတစ်ခုတည်းမှာ မိဘအရိပ်ခိုပြီး သားသမီးတွေ စုဝေးနေထိုင်ကြတဲ့ ပုံစံမျိုးအဖြစစ်သာ ရှိနေသေးတာကြောင့် သားသမီးတွေ အရွယ်ရောက်လည်း အလုပ်မလုပ်ဘဲ မိဘအိမ်မှာ စားနေနိုင်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ အလုပ်ကို “ဇံ“ရွေးချင်တိုင်း ရွေးပြီး နေတတ်ကြပါတယ်။
အလုပ်ကြီး အကိုင်ကြီးတွေ ခေါ်တဲ့အခါမှာ အတွေ့အကြုံကို အဓိက ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဖူးသူကို ဘယ်သူမှ မခန့်ချင်ပါဘူး။ ဒါကို သိထားကြဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကို သတိထားကြဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ဟိုဟောင်ဟောင် ဒီဟောင်ဟောင် လုပ်မနေပါနဲ့။ ရတဲ့အလုပ်ကိုသာ ၀င်လုပ်ပြီး အတွေ့အကြုံယူပါလို့ လူငယ်တွေကို အတွေ့ အကြုံယူပါလို့ လူငယ်တွေကို အကြံပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ ဘာဘွဲ့ကြီးတွေ ရထားရထား၊ ဘယ်သူ့သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်မလုပ်သူဟာ အလုပ်လက်မဲ့လို့သာ သတ်မှတ်ခံရမှာ ဖြစ်ကြောင့် သတိပြုသင့်ပါတယ်။
သိပ်ပြီးထွန်းကား တိုးတက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ အလျှံပယ်ပေါကြွယ်ဝပြီး နေမှု၊ ထိုင်မှု အဆင့်အတန်းတွေတိုးတက်လာတာမှန်တယ်။ မီးသွေးအတွက် ပူစရာမလိုဘူး၊ ရေစက်၊ မီးစက်နဲ့ အာဗာတာ အတွက်ကြောင့်ကြစရာမရှိဘူး၊ အဝေးထိန်းခလုတ်တစ်ခုနဲ့တင် အရာရာပြီးမြောက်နေတယ်ဆိုတာလည်းမှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ရှိသမျှ လူကုန်အလုပ်ထွက် အလုပ်နေရတဲ့ အတွက် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ မိဘ၊ ဘိုြးားတွေကို လူအိုရုံပို့ထားပြီး အထီးကျန်ဖြစ်နေစေရတာမျိုးတွေ၊ ၀င်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေကြားမှာ စိတ်ဖိစီးမှု အာွးေကြီးမားလွန်းလို့ လူတိုင်းလောက်နီးပါး စိတ်ဒဏ်ရာ ရနေကြတာမျိုးတွေ၊ စက်ကိရိယာတွေကို စိတ်ကုန်ငြီးငွေ့ လွန်းလို့သဘာဝတောတောင် ရေမြေ တွေရှိရာအရပ်ကို တကူးတက ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး သွားနေကြရတာမျိုးတွေကိလည်း သတိပြုသင့်ကြတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလိုနေရာမှာတော့ စက်မှု စီးပွားရေးသိပ်ပြီးဖြစ်ထွန်းသေး တာမဟုတ်လေတော့ နေမှု၊ ထိုင်မှု စရိတ်စကလည်း သူတို့တစ်တွေလောက် မကြီးလှသေးဘူး။ တော်ရုံတန်ရုံဝင်ငွေနဲ့ နေလို့၊ စားလို့ ဖြစ်နေသေးတယ်။ သူတို့ နိင်ငံကြီးတွေမှာ တစ်လ၀င်ငွေ ဒေါ်လာ 1000 လောက်သာရလို့ကတော့ လ၀က်ထိတောင် စားလောက်သောက်ဖို့ အလွယ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံလို နေရာကျတော့ တော်တော်လေး လူတန်းစေ့ နေလို့၊ ထိုင်လို့ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ် လျော့ပါးသက်သာတယ်။
ဒီအချက်တွေကို လူငယ်တွေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ အလုပ်မရှိတာလား၊ အလုပ်မလုပ်ချင်တာလားလို့လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ အလုပ်အကိုင် တွေခေါ်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေက အတွေ့အကြုံကို အဓိကထားတတ်ကြတယ်။ အကြုံကို အဓိက ထားတတ်ကြတယ်။ အလိုရှိကြောင်း ကြော်ငြာတိုင်းမှာ ဒါကို တွေ့နိုင်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းထွက်ရတဲ့အခါမှာ ဟိုယောင်၊ ဒီယောင်လုပ်မနေပါနဲ့။ ရတဲ့အလုပ်ကိုသာ ၀င်လုပ်ပြီး အတွေ့အကြုံယူပါလို့ လူငယ်တွေကို ပြောချင်တယ်။ ဘာဘွဲ့ကြီးတွေ ရထားရထား၊ ဘယ်သူ့သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်မလုပ်သူဟာ အလုပ်လက်မဲ့လိုသာ သတ်မှတ်ခံရမှာ ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုသင့်ကြတယ်လို့ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။
Posted by storyofmermaid at 9:51 AM4comments Read
မိုးခေါင်ခြင်း၊ မိုးရွာသွန်း ၍ ရေကြီးခြင်း တို့သည် မကောင်းမှုကြောင့် ကပ်ဆိုက်သည်ဟု ယုံကြသည်။
မိုးခေါင်လျှင် ဓါးသွေးကျောက်ကို ရေစိမ်ခြင်ဖြင့် မိုးရွာသွန်းစေသည်။
မိုးများလျှင် ဓါးသွေးကျောက်ကို ကျပ်ခိုးစင် တင်ခြင်းအားဖြင့် မိုးနည်းစေသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
ရွာထဲသို့ ချေ(ဂျီ) ဖြတ်ပြေးသွားလျှင် ရွာပျက်မည့်နမိတ်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
လိပ်ပြာအိမ်ထဲဝင် ၍ နေရာအနှံအပြားသို့ ပျံသန်းသွားပြီး တနေရာမှာ အတန်ကြာနားသော် ဧည့်သည်ရောက်မိ နမိတ်ဟု ယူဆကြသည်။
နေ၀င်ဆည်းဆာတွင် ကြက်ဖသွန်လျှင်၊ ကြက်မသည် အုတော့မည်ကဲ့သို့အော်လျှင် နမိတ်မကောင်းဟု ယူဆကြသည်။ ကျရောက်မည့် ဥပဒ်ကိုရှောင်းရှားနိုင်ရန် ထိုကြက်ကိုသတ်စားရသည်။ မစားမိပါက အိမ်သားအပေါ် ဥပဒ် ရောက်တတ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
ကြက်၊ ဘဲများ ကြက်ခြင်းဘဲခြင်းထဲသို့ ၀င်မိလျှင်လည်ကောင်း ခြင်းတောင်း၊ ပလိုင်း၊ အုပ်ဆောင်းဖြင့် ကြက် ဘဲများကို အလိုအလျောက်အုပ်မိရဲ့သားဖြစ်လျှင်လည်ကောင်း ယင်းကြက် ၊ ဘဲကို သတ်စားရသည် မစားမိလိုက်ပါက အိမ်တွင်ဥပဒ်ဖြစ်တတ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
အိမ်တွင် ပျားအုံဆွဲလျှင် နမိတ်ကောင်းသည် လာတ်လာဘကောင်းသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
အိမ်ပေါ်သို့ ဖွတ်တက်လျှင် နမိတ်မကောင်း အိမ်သားတစ်ဦးဦး သေကြေပျက်စီးတတ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
တောထဲတွင် ခရီးသွားနေစဉ် တစ်ဦးအမည်ကို တစ်ဦးမခေါ်ရ ။ နာမည်ခေါ်လျှင် သင်းခွေချပ်ကြားသောအခါ ယင်းနာမည်ကိုလိုက်ခေါ် ၍ ထူးမိသူသည် ဘေးဥဒ် ကျရောက်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
တောင်ယာထဲသို့သွားသောအခါ တောင်ယာတွင် စပါးကြီးမြွေတွေ့မည်ဆိုပါက နမိတ်မကောင်းဟု ယူဆကြပြီး ယာခင်းကိုပစ်ပယ်လေ့ရှိကြသည်။
အောက်ချင်းငှက်နှင့် အောက်ဇာ ငှက်တို့ကို မသတ်စားကောင်း၊ အဖိုနှင့် အမ သစ္စာရှိကြသည်။ အဖိုကိုသတ်လျှင် အမပါသေတတ်သည်။ သတ်မိပါက သားသမီးများကို ခိုက်တတ်သည်ဟု ယူဆထားကြပါသည်။
Posted by storyofmermaid at 2:52 PM 1 comments Read
ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် ငှက်ပျော်သီးစားလျှင် ကလေး အမွှာပူး မွေးတတ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်တွင် မျက်စိစွေသောကလေး၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မစုံသောကလေးများကို မကဲ့ရဲရ ကဲ့ရဲ့လျှင် မွေးလာသော ကလေးမှာ ၀ဋ်လည်တတ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်တွင် သစ်သီးဝလံမခူးရ၊ အသက်ကိုမသတ်ရ၊ မိုးချုပ်နေ၀င်ရေမချိုးရ၊ ခြံဝင်ပေါက် ထွက်ပေါက်မှာ ပိတ်မဆို့ရ ကိုယ်ဝန်အတွက် အန္တရယ် ရောက်တတ်သည်။
မီးဖွားပြီးသောအခါ ကလေးအချင်းကို ကောင်းမွန်စွာမြှုပ်နှံ၇မည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ကလေးတွင်ရောဂါထူမည်။ ရေထဲမျှောမပြစ်ရ ကလေးရေနစ်သေဆုံးတတ်သည်။
သက်တန့်ကို လက်ညှိုးမထိုးရ သက်တန့်တွင် အဖိုအမ နှစ်မျိုးရှိသည်ဟုယူစကြသည်။ သက်တန့်အပိုင်းပိုင်းပေါ်လျှင် အပူအအေးညီမျှပြီး တစ်တန်းတည်းပေါ်လျှင် ပူပြင်မည်ဟု ယူဆကြသည်။
ကြယ်ကြွေခြင်းကို မြင်ရသူသည် နမိတ်မကောင်းဟု ယူဆကြသည်။ ကြယ်ကြွေတာကိုတွေ့တဲ့သူသည် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောရ ပြောလျှင် အသက်တိုသည်။
ခြေသည်လက်သည်များနှင့် ဆံချည်ပင်များကို အိမ်အောက်သို့မချရ၊ ဇနီးသည်တွင် ကိုယ်ဝန်ရှိက ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည် ဓါးရိုးတပ်ခြင်း၊ မသာအလောင်း ထမ်းခြင်းမပြုလုပ်ရ။
မင်္ဂလာအိပ်ခမ်းကို လင်စုံမယားစုံရှိသောသူမှ ပြင်ပေးရမည်။ သို့မှသာ သေးဆုံးခြင်းနှင့်ကင်းဝေးပြီး သားသမီးများနှင့် စုံစုံညီညီ နေရလိမ့်မည်ဟု ယူဆကြသည်။
ရွာအနီး ရွာပေါ်တွင် ငှက်ဆိုးထိုးလျှင် ရွာတွင် လူသေတတ်သည်။ သို့မဟုတ် ၇ွာတွင် မကောင်းမှု ကြရောက်တတ်သည်။
Posted by storyofmermaid at 2:47 PM 1 comments Read
အချိန်အခါ မဟုတ်ပဲ ပန်းများဖူးပွင့်လျင် နိမိတ်မကောင်းဟု ယူစကြသည်။
ကောင်းကင်တွင် တိမ်တွေ ကွက်ကျား ကွက်ကျားပေါ်လျှင် ကျားရဲ တိရစ္ဆာ သောင်းကျန်းတတ်သည်။
နဂါးငွေ့တန်းရာတွင် နဂါးငွေဖြစ်သန်းသွားသော အရပ်ဒေသမှာ သီးနှံပျက်စီးခြင်းနှင့် လူတို့ ဒုက္ခကြုံရမည့် အတိတ်နမိတ်ဖြစ်သည် ဟု ယူစကြသည်။
မိုးခေါင်ခြင်း ၊ လေမုန်တိုင်းကျခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ သီးနှံများရှာပါးခြင်း၊ ပိုးဖျက်ဆီးခြင်း၊ ၀မ်းရောဂါ၊ ကျောက်ရောဂါ အစရှိသည်တို့ကျရောက်လျှင် အုပ်ချုပ်သူတို့ အကျုင့်သီလ ပျက်ခြင်းကြောင့်ဟု ယူဆကြ၏။
ဥပါပျံခြင်းသည် ဥစ္စာစောင့်နတ်များ တနေရာမှ တနေရာသို့ ပြောင်းရွေ့သည် ၊
တော်လဲခြင်းသည် မိုးကောင်းကင်မှရှိသော နတ်နဂါတို့ တရပ်မှတရပ်သို့ ပြောင်းရွေ့မြည်ဟည်းသံများ ဖြစ်သည် စသည်ဖြင့် ယူဆကြပြီး လက်ထပ် ထိမ်းမြားသူများနှင့် ကလေးမွေးဖွား သူများအတွက် နိမိတ်မကောင်းဟု ယူဆကြသည်။
မိုးချုန်းခြင်း၊ လျှပ်လက်ခြင်း၊ သက်တန့်ပေါ်ခြင်း၊ နေကြတ်ခြင်း၊ လငပုတ်ဖမ်းခြင်း စသည့်အဖြစ်အပျက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီ အတိတ်နမိတ်များ အမျိုးမျိုးဖတ်ကြပါတယ်။
လငပုပ်ဖမ်းသည်ကို မကြည့်ရ၊ ကြည့်ပြီး လန့်ဖျပ်ခြင်း ဖြစ်လျှင် မုဆိုးမ ခုနစ်ယောက်အား ခေါ်ပြီး လိပ်ပြာခေါ်ပေးစေရသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမသည် အော်ခြင်း၊ ငေါက်ခြင်း၊ စိတ်ဆိုးခြင်းများမရှိစေရ၊ ရှိခဲ့သော် ရရှိလာမည့်ကလေး စိတ်သဘောထားမကောင်းသော ကလေးဖြစ်တတ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမသည် မျောက်သားမစားရ၊ စားလျှင် ရလာသောကလေးသည် မျောက်ကဲ့သို့ဆော့တတ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမသည် ဒေါင်းသားစားလျှင် မွေးလာသောကလေးသည် ချောမောလှပမည်ဟု ယုံကြည့်ကြသည်။
Posted by storyofmermaid at 2:24 PM 1 comments Read
ကရင်ရိုးရာ သုတပဒေသာ စာအုပ်မှ . . . . . . .
ခရီးသွားမည့်ဆဲဆဲ သားငယ်၊ သမီးငယ် ငိုယိုသည်ဖြစ်စေ၊ အိမ်သားတစ်ဦးဦးက ချေသည်ဖြစ်စေ နိမိတ်မကောင်းဟုဆိုကာ ခရီးမသွားပဲနေလေ့ရှိသည်။
ခရီးလမ်းတွင် မြွေဖြတ်ကူးတာတွေ့လျှင် ခရီးလမ်းရှည်တတ်သည်။
ချေငယ် ဆိုင် ဆတ် တမျိုးမျိုး လမ်းဖြစ်ကူတာတွေ့လျှင် နမိတ်မကောင်းဟုဆိုကာ နောက်သို့သာ လှည့်ပြန်လေရှိသည်။
ကလေးငယ်များကို နားဖောက်ပေးထားလေ့ရှိသည်။ နားမဖေါက်ပေးထားလျှင် နောင်ဘ၀တွင် မျောက်ဖြစ်တတ်သည် (သို့) အချို့ဒေသတွင် ပြောစကားနားမထောင် စသည့်ဖြင့် ယုံကြည်ကြသည်။
ငလျင်လှုပ်သောအခါ ခေါင်းလျှော်ပြီး ဆီမထည့်ထားလျှင် ရူးတတ်သည်။ ငလျှင်လှုပ်လျှင် ကောင်းသော အတိတ်နမိတ် ယူတာလည်းရှိသလို မကောင်းသော နမိတ်ယူတာလည်းရှိသည်။
အပိုင်း(၂) သို့ ……..
Posted by storyofmermaid at 2:48 PM0comments Read
Chart Wizard (I)
အောက်မှာ ဖော်ပြတဲ့အတိုင်း ဇယားကွက်လေးကို အရင်ဆောက်လိုက်ရအောင်။
အဆင့်(၁) Standard Types နဲ့ Custom Types မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုရွေးပါ။
အဆင့်(၂) Data range မှာ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း array လုပ်ပါ။
အဆင့်(၃) Row ကိုရွေးမယ်ဆိုရင် အခုပုံမှာပေါ်တဲ့ အတိုင်း X ၀င်ရိုးပေါ်မှာ mess,G,O ဆိုပြီးပေါ်နေမှာပါ။ ကော်လံကို ရွေးမယ်ဆိုရင် ပထမ array လုပ်တုန်းက B3:D6 ထိပဲ လုပ်ထားတာဆိုတော့ A3:D6 ထိပြန်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင် X ၀င်ရိုးမှာ 2005,2006,2007 ဆိုပြီးပေါ်မှာပါ။
အဆင့်(၄) Series ကိုေ၇ွးပါ။ အောက်နားက Series box မှာ Series 1,2,3 ဆိုပြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်
Series box ထဲက Series1 ကို select လုပ် ပြီးရင် Name နေရာမှာ 2005 ဆိုပြီး ရိုက်ထည့် ဒါမှမဟုတ် ဘေးနားက အနီရောင်မြှားလေးကို နှိပ်ပြီး Cell A4 ကိုရွေးပါ အလားတူပဲ Series2ကို 2006 ပြောင်း, Series3ကို 2007 ပြောင်းပါ။
Values: ဆိုတဲ့အကွက်ကတော့ ဥပမာ ကျမတို့က 2005 ကို name ပေးပြီးရင် values: နေရာမှာ B4:E4 ကို array လုပ်ရမှာပါ။ ပုံထဲမှာတော့ သူကလုပ်ပြီးတာ ပါပါတယ်။
Add , Remove ဆိုတာကတော့ Series box ထဲက ကိုယ်ပေးထားတဲ့
Name ကို ဖျက်ချင်တဲ့အခါ တိုးချင်းတဲ့အခါမှာ သုံးပါတယ်။ အားလုံးပြီးရင် next ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့်(၅) Titles >Chart title မှာ Charts ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုရေးလိုက်ပါ။
Category(X) axis: ဆိုတဲ့နေရာက X ၀င်ရိုးမှာ ပေါ်စေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကိုယ်ပေါ်ချင်တဲ့စာသားကိုရိုက်ပါ။ Y ၀င်ရိုးမှာလည်းရိုက်ထည့်ပါ။ ကျန်တာကတော့ ဇယားကွက်းပုံစံ ဘယ်လိုထားချင်တယ်ဆိုတာတွေပါ အဲ့ဒါတော့ မပြောပြတော့ဘူး လိုက်စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးကိုယ်ကြိုက်တာ ပြင်ပြီးပြီဆိုရင်
Next ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင်
As New Sheet , As object in ဆိုတာ ကြိုက်တာေ၇ွးလိုက်ပါ။ ကျမကတော့ As object in ကိုေ၇ွးထားပါတယ်။ ပြီးရင် Finish ကိုနှိပ်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းကို နောက်နေ့မှ ဆက်ရေးတော့မယ်။ ပြီးရင် ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ်နေမှာပါ။
Posted by storyofmermaid at 12:21 PM0comments Read
အချစ်တွေကို ငါလေ . . .
ငါလေ . . . အပါအ၀င်ပေါ့
မင်း . . . သိလေမလား
မြင်ပင်တွေကြား မင်းငါ့ကိုရှာ
Posted by storyofmermaid at 2:09 PM2comments Read
စမိုင်းမေ ဆိုတဲ့ကလေးမ တစ်ယောက် သူ့အမေရင်ခွင့်မှာ အိပ်နေရင် မေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်
“အမေ သမီး ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် အိပ်ရတာလဲ ” ဆိုပြီး မေးတာပေါ့။
ဒါနဲ့ သူမအမေ ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ စကားကို ကြားပြီး စမိုင်းမေ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက ဘယ်တော့မှ အဲ့ဒီမေးခွန်းကို ထပ် မမေးတော့ဘူးတဲ့။
စမိုင်းမေ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် အိပ်ယာထနောက်ကျလို့ ရုံးအမြဲနောက်ကျနေတဲ့အတွက် သူ့မ သူဌေးနဲ့ ပြသနာ တက်နေရတယ်။
တစ်နေ့တော့ သူ့သူဌေးက ခေါ်ပြောတယ်တဲ့ “မင်း နောက်တစ်နေ့နောက်ကျရင်တော့ အလုပ်ပြုတ်ပြီးတားပဲ” ဆိုပြီး ခေါ်ပြောတာပေါ့။
ဒါနဲ့ စမိုင်းမေလည်း ရုံးဆင်းတော့ ဆေးခန်းဝင်ပြပြီး အိပ်ပြန် ဆေးသောက် စောစောအိပ်လိုက်တာပေါ့။
နောက်တစ်နေ့ ကျတော့ အိပ်ရာက စေားစေားနိုးပြီး ရုံးကို သူမက အရင်ရောက်နေတာပေါ့
သူဌေးလည်းလာတဲ့အခါ သူမက သူဌေးကို ပြောလိုက်တယ်-
“သူဌေး ဒီနေ့ ကျမ စေားစေားရုံးရောက်တယ်နော်” ဆိုပြီးပြောတာပေါ့။
(မှတ်ချက် - The Best English ဂျာနယ်မှ ယူသုံးထားပါ)
Posted by storyofmermaid at 9:52 AM 1 comments Read
ဒီနေ့တော့ လွယ်လွယ်လေး ဖြစ်တဲ့ ကော်ပီ ပေစ့် လုပ်နည်းပဲ ပြေားပြတော့မယ်။
ဒီလုပ်နည်းကတော့ သိတဲ့သူလည်း သိကြမှာပဲ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် လွယ်လွယ်လေးပါ အောက်က ပြေားထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ကြည့်ကြရအောင်နော်။
Name ဆိုတဲ့ ဒေါင်လိုက်ကော်လံကို အလျားလိုက်ဖြစ်အောင်ကော်ပီလုပ်မယ်ဆိုရင် အရင်းဆုံး ကိုယ်လုပ်မဲ့ cell ကွက်ကို select လုပ် လုပ်ပြီး ကော်ပီလုပ်ပါ
ပြီးရင် ကိုယ်ထားချင်တဲ့ cell ကွက်မှာ Right click လုပ် Paste Special ကိုေ၇ွး Paste Special box ကျလာရင် အောက်ဘက်နားမှာ Transpose ကိုရွေး ok
အောက်မှာ ပုံလေးတွေ အဆင့်ဆင့် ပြထားပါတယ် စပ်းသပ်ကြည့်ပါ။
နောက်တစ်ခုက paste အောက်မှာ Values ကို တွေ့မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက ဘာအတွကလဲဆိုရင် ကျမတို့တွေ formula သုံးထားတဲ့ cell ကွက်က ဂဏန်းကို ရချင်ရင် ကော်ပီးလုပ်ပြီး paste specials > Value ကိုရွေးလိုက်ရင် အစဉ်ပြေသွားပြီးပေါ့
Posted by storyofmermaid at 9:46 AM0comments Read
Formula + letter
Excel အကြောင်းအများကြီးမသိပေမဲ့ ကိုယ်သိတာလေးကို မသိတဲ့သူတွေအတွက် မျှဝေချင်လို့ပါ။ သူများတွေလို့ အားကျမိလို့ပါ။ ကိုယ်သိတာလေးပဲ တတ်သလောက်
ကျမတို့တွေ excel ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ ကိန်းဂဏန်းတွေကို အပေါင်းအနှုတ်အမြှောက်အစား စသည်ဖြင့်လုပ်ပြီး တခြားစားသားတွေနဲ့ တွဲပြီးတော့ cell တစ်ကွက်ထဲမှာ ပေါ်စေချင်ရင် ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါ။
စာသားကို ပေါ်စေချင်ရင် “ ” ထဲမှာ $ per hour ထည့်ရပါတယ်။
Text တစ်ခုစီမှာ ကိုယ်ပေါ်ချင်တဲ့ cell ကို click
Posted by storyofmermaid at 10:45 AM0comments Read
နာရီနိုးစက်သံဟာ ကျွန်ုပ် မကြားချင်ဆုံးသော အသံတွေထဲက တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တခါတရံ သူက ကျွန်ုပ်အတွက် အသုံးတော့ဝင်ပါတယ်။ တချို့ကိစ်စတွေမှာ နောက်မကျအောင် သူက ကိုယ့်ကို အချက်ပေးတော့ သူ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မရှိလည်းကောင်း ရှိလည်းကောင်းဆိုတာ သူ့ကိုပြောတာထင်တယ်။
မနက်ဖြန်မနက် ထမင်းချက် ဂျူတီပြန်ကျတော့ စေားစေားထရမယ်ဆိုပြီး နာရီကို မနက် ၃ နာရီ သံပတ်ပေးထားပြီး နာရီးသံ မကြားမှာဆိုးလို့ ခေါင်းရင်းမှာထားပြီး အိပ်တာပေါ့။ အစေားကြီးထချက်ရတယ်ဆိုလို့ လယ်ထဲဆင်းဖို့တော့မဟုတ်ဘူး အခု ရန်ကုန်မှာ မီးပျက်နေတော့ အဲ့ဒီအချိန်ထချက်မှ အဆင်ပြေတာကို။ ဒါကြောင့် စောစေားထချက်ရတာ။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်ုပ်အိပ်ပျော်သွားတော့ အိမ်မက်ထဲမှာလေ ဘရစ်နီစပီးရားလို ကမ်းစပ်မှာ စတိတ်ရှိုးဆိုနေတာ ပရိတ်သတ်ကလည်း အများကြီးပဲ အဟဲ့ . . . နောက်တစ်ခု ကျွန်ုပ်ဆိုနေတဲ့သီချင်းရဲ့ တီးလုံးကလေ . . တီးတီး . . . တီးတီး . . ဆိုပြီးတီးနေတာလေ ဒါနဲ့ ကျွန်ုပ်လည်း သီးချင်းဆိုတာပေါ့ ပရိတ်သတ်တွေ အများကြီးကို တီးလုံးကလည်း မြန်လာလိုက်တာ တီးတီး တီးတီး တီးတီး တီးတီး တီးတီး . . . နဲ့ဆိုတော့ ကျွန်ုပ်ကလည်း အမြန်လိုက်ဆိုးရတာပေါ့။
သီချင်းဆိုလို့ကောင်းတုန်းရှိသေးတယ် ကျွန်ုပ်ထက်ကျယ်တဲ့အသံ ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ဘာသံလည်းသိလား? စမိုင်းမေ ထတော့တဲ့ ဒီလောက်တအိမ်လုံးနိုးနေပြီး နင်က မနိုးသေးဘူးလားတဲ့။ သြော် . . . အခုမှသိလိုက်တယ် အိမ်မက်မက်နေတာကို ။ မျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီး ဘေးနားကိုကြည့်လိုက်တော့ ညီမတော်က စောင်ကို ခေါင်းမြီးခြုံးပြီး အိမ်နေလိုက်တာ စောင်ခြုံထဲမှာ နားပိတ်ထားတယ်နဲ့တူပါ့။ နောက်ဖက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြန်တော့ အမယ်လေး အိပ်ချင်းတဲ့စိတ်ကို ပျောက်သွားတာပဲ နံဂါးတို့ မျက်စောင်း အရိပ်သုံးပါးမရွေးဘူး ပြာဖြစ်တယ်ဆိုတာ အဲ့ဒါပဲထင်တယ်။ ချက်ချင်း မီးဖိုခန်းထဲ ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိသွားတော့တယ်။
Posted by storyofmermaid at 1:56 PM 1 comments Read
မနက်က RFA က လမ်းဆုံက ဂျမ်းဘုံ အစီအစဉ်ကို နားထောင်လိုက်ရတယ်။ မင်းဆိုးမင်းညစ်တွေအကြောင်း ပြေားထားတာလေ။ ဘုရင်ကြီးက မင်းကျင့်တရားအတိုင်း တိုင်းပြည်ကို မအုပ်ချုပ်ပဲ ပြည်သူတွေကို မတရားနှိပ်စက်ပြီး အုပ်ချုပ်တာလေ။ အခွန်တွေ မတရားကောက်တော့ ပြည်သူတွေ နေ့ဆို၇င်ကြောက်ပြီး တေားထဲ ပုန်းနေရ။ ညဆိုရင် အိမ်ပြန်အိပ်တော့ သူခိုးဓါးပြန်ရန်ကြောက်ရနဲ့ ဖြစ်နေကြတာပေါ့။
တစ်ရက်တော့ ဘုရင်ကို အရောင်အ၀ါ တောက်တောက် ပြောင်ပြောင်နဲ့ ပုဂ်ဂိုလ်ကိုယ်ထင်ပြပြီး ပြည်သူတွေကို ဒီလိုအုပ်ချုပ်ရင် မင်းလည်းဒုက်ခ ပြန်ခံစားရမယ်ပေါ့ အဲ့ဒီလိုပြောတော့ ဘုရင်ကလည်းကြောက်ပြီး ဒီလိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီး ပြန်ကတိပေးလိုက်တယ်။
နောက်တစ်နေ့ ပုံသားနဲ့ ဘုရင် တိုင်းခန်းလှည့်လည်ကျတာပေါ့ အဘိုးအိုတစ်ယောက်က တေားထဲက အိမ်ကိုပြန်လာရင်း ဆူးစူးသွားတော့ ဘုရင်ကို ကျိန်ဆဲတာပေါ့။ ဒါဟာ သူကြောင့် ငါတို့တွေ တေားထဲမှာ အိမ်ရလိုဆိုပြိး ပြောတာပေါ့။
ဘုရင်တိုင်းခန်းလှည့်လည်းရင် နောက်ထပ် ဟင်းရွက်ခူးနေတဲ့ အဖွားအိုကိုတွေ့ရော အဘွာအိုက အရွက်ခူးရင်း ဆူးစူးတော့ ဘုရင့်ကိုကျိန်ဆဲပြန်တယ်။ ဘုရင်က ဘာလို့ ကိုယ့်ဟာကို ဆူးစူးတာ ဘုရင်ကို ကျိန်ဆဲး ရတာလဲလို့မေးတော့ အဖွားအိုက မင်းဆိုးမင်းညစ်ကြောင့် သူ့သမီးတွေ ကို သားမတ်မတ် မယားမတ်မတ်ပေါင်းမဲ့သူမရှိတော့ သူကပဲအရွက်ခူးနေရတာ ဒါတွေဟာ ဘုရင့်ကြောင့်ဆိုပြီးပြောတာပေါ့။
နောက်တစ်နေရာလဲရောက်ရော နွားထွန်းနေတဲ့သူရဲ့နွားက လှဲးကျပြန်ရော ဒါနဲ့ဘုရင်ကို ကျိန်ဆဲးတာပေါ့။
ဒီနားမှ ဘာပြန်ပြေားလဲ ကျမလည်း မသိတော့ဘူး မေ့နေတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ကျမက အခုခေတ်မှာ ပြည်သူတွေခံစားရတာ နည်းနည်းလေး ထပ်ဖြည့်ချင်လို့ အပေါ်က အများကြီးရေးလိုက်ရတာ။
မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ လူငယ်တစ်ယောက် နိုင်ငံခြားမှားအလုပ်လုပ်ဖို့ အင်တာဗျူးသွားတာပေါ့။ အင်ဂျင်နီယာလေးက $ 1800 တောင်းတာပေါ့။ အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားက ဘာပြန်ပြေားလဲသိလား တကယ်ပါဘဲ အသည်းတောင်နားတယ် Are u Myanmar? It is not possible. တဲ့ အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်တဲ့။ ဒါတွေ ဘယ်သူကြောင့်လဲ ကိုယ့်နိုင်ငံက လူငယ်တွေကို သူများနိုင်ငံက အထင်းမကြီးတာ။ ဒီလိုမျိုး ဘယ်နှစ်ယောက် မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တွေ ကြုံပြီးပြီလဲဆိုတာ မသိနိုင်ဘူး။ ဒါတွေဟာ ဘယ်သူလက်ချက်တွေလည်း ။ အဲ့ဒါ ဘယ်သူအုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်ရဲ့ ပညာရေးတွေလည်း။ အဘိုးကြီးနဲ့ အဘွားကြီးလို ကျိန်ဆဲလိုက်ရရင်တော့ . . . .။
Posted by storyofmermaid at 1:54 PM0comments Read
ကိုယ်တော် လက်တော်မြတ်နှင့် တို့ထိ
ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ကျွန်ုပ်ကြုံတော့
Posted by storyofmermaid at 10:17 AM0comments Read
သတိ - မီးကစားနေသည်
အခုတလော လျှပ်စစ်ရုံးက ကလေးကစားသလို မီးပေးနေလို့ တော်တော် စိတ်ပျက်မိတယ်။ မီးကိုအလှည့်ကျ ပေးရင်းလည်းပေးတာမဟုတ်ဖူး ပျက်လိုက်လာလိုက်နဲ့ ။ တခါတလေ ထမင်းစားကောင်းနေတုန်းရှိသေးတယ် မီးပျက်လို့ ဖရောင်းတိုင်နဲ့ မီးခြစ်လိုက်ရှာရပြီ။ ဖရောင်းတိုင်နဲ့ ထမင်းစားနေတုန်း မီးကပြန်လား စားပြီးတော့ ပုဂံတွေဆေးပြီး TV ကြည့်မယ်လို့ ထိုင်ကာရှိသေးတယ် မီးပြန်ပျက်တယ်။
ဒါတွေကအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး သူတို့တွေ အဲ့ဒီလိုမျိုး ခဏခဏ ပျက်လိုက်လာလိုက်နဲ့လုပ်နေတော့ အလုပ်များတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေ အတွက် လုံးဝမကောင်းတဲ့ကိစ်စ ကြီးပါ။ စားသောက်ဖို့ ပြင်ဆင်ရ တခြားသော အိမ်မှုကိစ်စ တွေနဲ့ လုံလည်းလိုက်နေတယ်တဲ့ အိမ်ရှင်မတွေ ချက်ပြုတ်နေရင် တခြားအလုပ်လုပ်တော့ မီးပျက်တဲ့အချိန်မှာ ဟင်းအိုးမီးခလုတ်တွေ ပိတ်ဖို့သတိမရတော့ မီးလောင်မှုတွေ ဖြစ်ရော. သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကပြောတယ် မီးလောင်မှုတွေမရှိသေးတော့ တစ်ရက်ကို ၄ ခါလောက်ပျက်မယ် မရှိသေးရင် ထပ်တိုးပြီး ပျက်အုံးမယ်ထင်တယ်တဲ့။
ဘာပြောပြော မီးကိုအလှည့်ကျ သူ့နာရီနဲ့ နာရီပေးရင် တော်တော်ကောင်းမယ် မနက်ထမင်းထချက်ရင် မီးကမလား နောက်နေ့ အစောကြီးထချက်တော့ မီးကမပျက် . . .. အော် . . . ဒုက်ခ
Posted by storyofmermaid at 9:57 AM0comments Read
Posted by storyofmermaid at 10:43 PM0comments Read
Posted by storyofmermaid at 9:53 AM0comments Read
ထမင်းဆိုင်မှာ သင်္ဘောသားတစ်ယောက်နဲ့ ပင်လယ်ဓါးပြတစ်ယောက်တွေ့ပြီး စားသောက်ကြပြီး စကားလက်ဆုံကြနေကြတယ်။ သူတို့အတွေ့အကြုံကို ပြန်ပြောပြီး စကားလက်ဆုံကြနေကြတာပေါ့။
ပင်လယ်ဓါးပြက ခြေတစ်ဖက်မသန်လို့ သစ်သားခြေထောက်တပ်ထားရတယ်။ လက်တစ်ဖတ်ပြတ်နေလို့ သံချိန်ကြီး စွပ်ထားရတယ်။ မျက်လုံး တစ်ဖက် ပျက်စီးနေလို့ သားရေပြားကလေးဖုံးထားရတယ်။
သင်္ဘောသားက “ခြေထောက်ဘာဖြစ်လို့လဲ” မေးတယ်။
“ဓါးချင်းခုတ်တော့ ကျုပ်လက်ပါသွားတာဗျာ” တဲ့။
“ခင်ဗျား မျက်လုံးက ဘာလို့ကန်းသွားတာလဲ”
“စင်ရော်က ချေးနဲ့ပန်းသွားလို့ မျက်လုံးထဲဝင်ပြီး ကန်းသွားတာဗျ” လို့ ပြန်ဖြေသတဲ့။
သင်္ဘေသားက အံ့အားသင့်ပြီး “စင်ရောချေးဝင်ရုံနဲ့ ဖြစ်ရလားဗျ” လို့ ပြောတော့ သူက ဘာပြန်ပြေားလဲ သိလား။
“ဟုတ်ပါ့ဗျာ ကျုပ်လက်တစ်ဖက် သံချိတ်တပ်ရတဲ့နေ့မှာပဲ ဒီလိုဖြစ်ရတာပါဗျာ” တဲ့။
Posted by storyofmermaid at 5:30 PM0comments Read
အသားအရောင်ကွဲပြား အလွာချင်းလည်း မတူညီပါ
Posted by storyofmermaid at 5:14 PM0comments Read
လူဆိုးတို့အကြောင်းကြောင့် စိတ်မပူနှင့်။ မတရားသဖြင့် ပြုသောသူတို့ကို မငြူစူနှင့်။ အကြောင်းမူကား ။ သူတို့သည် မကြာမမြင့်မှီ မြက်ပင်ကဲ့သို့ ရိတ်ခြင်းကို ခံရ၍
စိမ်းသော ပျိုးပင်ညှိုးနွမ်းသကဲ့သို့ ဖြစ်ရလိမ့်မည်။
ဆာလံ 37 14~17
မတရားသော သူတို့သည် ဆင်းရဲငတ်မွတ်သောသူတို့ကို လှဲချခြင်းငှါ၎င်း၊ ဖြောင့်မတ်စွာ ကျင့်သော သူတို့ကို သတ်ခြင်းငှါ၎င်း၊ ဓါးကိုထုတ်လျှက်၊ လေးကိုတင်လျက်နေတတ်ကြ၏။ သို့သော်လည်း သူတို့ဓါးသည်သူတို့နှလုံးထဲသို့ဝင်လိမ့်မည်။ သူတို့လေးတို့သည်လည်း ကျိုးကြလိမ့်မည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူ၌ နည်းသောဥစ္စာသည် မတရားသော သူကြီးတို့၌ ကြွယ်ဝသောဥစ္စာ ထက်သာ ၍ ကျေးဇူးရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ မတရားသောသူ၏ လက်ရုံးသည် ကျိုးရလိမ့်မည်။ ဖြောင့်မတ်သော သူကိုကား၊ ထာဝရဘုရားမစတော်မူ၏။
မတရားသောသူ၏ သားမြေးတို့ မူကား၊ ပယ်ရှင်းခြင်းကို ခံရကြသည်။
မတရားသော သူသည် ဖြောင့်မတ်သောသူကို ချောင်းမြောင်း၍ သတ်ခြင်းငှါရှာကြံတတ်၏။
ထာဝရဘုရားကိုမြော်လင့် ၍၊ လမ်းတော်ကိုရှောက်သွားလော့။ ပြည်တော်ကို အမွေခံရသောအခွင့်နှင့်ချီးမြှောက်တော်မူမည်။
Posted by storyofmermaid at 10:41 AM 1 comments Read
အမှောင်တွေလွမ်းမိုး အရာရာကို မမြင်နိုင်
မျှော်လင့်ခြင်းကင်းမဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း ဆိုတဲ့
ကဗျာသိပ်မရေးတတ်တော့ ကဗျာကို နားမလည်မှာဆိုးလို့ပါ။ဘယ်လောက်ပဲ ဘ၀မှာ စိတ်ဓါတ်ကျပြီး မျော်လင့်ခြင်းကင်းမဲ့နေပစေ ကျမတို့အတွက် ထွက်ပေါက်တော့ ရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
Posted by storyofmermaid at 4:58 PM 1 comments Read
Kachin Land Photo
လား . . . . . . .
ကြိုက်တာကိုရွေး မြန်မာမိသားစု ပဒုန်မာ
လူတော်လူကောင်းများ ကိုသင့် မသဒ္ဒါ ကိုထိုက် ကိုဖိုးဇေ ကိုနစ်နေမန်း ကိုကဒေါင်း ကိုဆည်းဆာညို မပင့်ဂိုလ်း မဆိုးဝှက် ကိုဇော်ဇော်မောင် ကိုဇော်ထွန်းအောင် ကိုသာလှဦး မဂျေ ဇော်ဘားမား Chan Myae Oo မမေနှင်း မင်းတစေ မေပျို biggest ထာဝယ်သား စိုးဇေယျ မန်လှိုင်းငယ် မင်းကျန်စစ် မျိုးချစ်မြန်မာ ပိုးနှံကောင် စိုးထက် လင်းလက်ကြယ်စင် MM Thinker ဦးဇင် မဗေဒါ Cho Nge Oo Upasaka ကိုဇော်မျိုး(ဗမာပြည်)
ကြိုက်တာကိုရွေး Arakanmusic မြန်မာ့သဘာဝအလှ
ကြိုက်ရာရွေးချယ် ဒီဗွီဘီ CNN News ရိုးမ၃ မိုးမခ KNO Kachinpost Kachinnet AKSYU
© New Blogger Templates | storyofmermaid